विपी माटोको स्पन्दन बुझ्ने राजनेता : प्रथम राष्ट्रपति डा. यादव - Rajmarga
विपी माटोको स्पन्दन बुझ्ने राजनेता : प्रथम राष्ट्रपति डा. यादव
कार्यक्रमको सहजीकरण हरेकपल साहित्यका संयोजक मनोजादित्य न्यौपानेले गर्नुभएको थियो । ‘विपी विमर्शका बहुआयाम’ कार्यक्रम कोइरालाको जन्मजयन्ती भदौ २४ सम्म हरेक बुधबार दिउँसो १ बजे जुम प्रविधिमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै पहिले बुधबार हुँदै आएको ‘लकडाउन कला संवाद’ कार्यक्रमको ठाउँमा यो नयाँ कार्यक्रम शुरु गरिएको हरेकपल डट कमका सम्पादक थापाले जानकारी दिनुभयो ।
Previous post:लकडाउन अन्त्य भएको सरकारको घोषणा, निजी सवारीको जोर विजोर हट्यो
Next post:३६ घण्टापछि खुल्यो नारायणगढ–मुग्लिन सडक